Esikhathini samanje ulwazi ngeminyaka futhi ubani imoto uyazi ukuthi Ergonomics umshini buvezwa shock absorbers. It kuyingxenye esisemqoka ye ukumiswa imoto yesimanje. Kanjani ukuncintisana ungase yezimoto emakethe abakhiqizi ezahlukene ukushaqeka wezinciphisi? Izibuyekezo abashayeli ngezinga elithile, ezibonisa lesi simanga. Phela, isithombe kulo mncintiswano ukuze umthengi ithakazelisa kakhulu: American, isiJalimane, izinkampani Japanese wamcela ukuba iphimbo. Ngenxa yalokho, monotube ukushaqeka wezinciphisi linqobe-ipayipi ezimbili.
Kafushane phezu yesimanje ukushaqeka wezinciphisi emakethe
Umklomelo Lonyaka Russian "Autocomponent unyaka" ukunquma umkhiqizo oyimpumelelo kakhulu esigabeni ngasinye. Ngokwesibonelo, ngo-2016 kusukela brand Russian phambili ukushaqeka wezinciphisi kwaba "DEMFI", ethula ukuma futhi dampers ephansi ekupheleni uchungechunge "Induduzo" ncono lizinga "Premium" futhi "-Drive". imikhiqizo yenkampani - phambili bakhulise ukushaqeka wezinciphisi Vaz, IZH, Lada, Ford Focus2, Renault Logan . Namuhla "DEMFI" - inkampani encane (iqashe abantu angaphansi kuka-60), kodwa zobuchwepheshe kanye nolwazi khudlwana, ikhono sandise ukukhiqiza banikezwe funa efanele.
"Plaza" simelwa ukwazisa ukushaqeka wezinciphisi UAZ "Hunter" kusukela inkampani Petersburg. Zitholakala ezinguqulweni ezintathu: "ejwayelekile", "Sport" futhi "kakhulu". Phakathi angaphandle lokuqala ezindaweni wesine wona iwine sha Monroe (USA / Belgium), TRW (eJalimane), KYB (Japan) kanye EGT (Lithuania) ngokulandelana.
Kanjani ukuqonda imfundamakhwela amateur, abanye wezinciphisi kangcono? Phela, abakhiqizi omhlaba anothile khombisa ukuthuthukiswa ngokuya eyinkimbinkimbi ekilasini ngamazwe. Ngokwesibonelo, Monroe kuphela namuhla engenayo emakethe nemikhiqizo ezahlukene "reflex" ukushaqeka wezinciphisi, "Sensa-ithrekhi", "oridzhional", "Adventure", "van Magnum." Manje linqobe imakethe imoto namuhla. A uphawu idumela eliphezulu inkampani Monroe kuyinto isethi ephelele ukushaqeka yayo wezinciphisi, ukusungulwa ngqo yokwakha izimoto Ford, Nissan, Renault, Mitsubishi, Volvo, Porsche.
I-German embonini yezimoto isebenzisa uthuthumele ikakhulu yasekhaya. Izibuyekezo abashayeli abonisa ukuthi Opel, Mersedes, Audi ngokuvamile babejabulela ukukhiqizwa ZF Group (engumnikazi brand Sachs, Boge, TRW). Ngashaqeka yasekuqaleni "Toyota", "Mitsubishi" - kukhona imikhiqizo yenkampani Japanese KYB (brand KAYABA). Nokho, lokhu brand iyaduma ngaphezulu-New futhi Izwe Elidala. Okwamanje, amazwe alandelayo uchungechunge A: Amafutha Premium, igesi-uwoyela, i-Excel-G, igesi negesi-A-nje, umdlalo Ultra-SR, AGX adjustable, off-road Monomax.
Yini uthuthumele "Hyundai" (inkampani Korean) ubeka izimoto zayo emgqeni inhlangano? Kunengqondo ukuthi enye inkampani Korean esikhiqiza izingxenye yezimoto. Futhi (ikakhulukazi Korea) eliholwa kokubili amafemu umndeni. It ngokuthi umenzi ukushaqeka wezinciphisi ngaphansi Mando brand ngu Halla Group. izitshalo zayo usebenza e-Korea, India, Turkey, China, Poland, USA. Kuwo lo nyaka, wenza amashumi ezigidi dampers. Kufakiwe ku zokuthutha yabo Mando-wezinciphisi "Ford», Peugeot, Nissan, BMW, Suzuki, Renault, Gaz. Kuyinto ephawulekayo ukuthi shock absorbers KIA (omunye avtokorporatsii Korean) ayatholakala kusukela izinkampani Halla Group.
Umncintiswano phakathi abakhiqizi kubaluleke kangaka ukuthi brand amazwe amelana ngayo ngempumelelo by zendawo. Ikakhulukazi, abanye abashayeli uncamela European izimoto Japanese. Ngakho, ngokombono abanikazi izimoto, isidingo okwamanje okusezingeni eliphezulu gazomaslyany ukushaqeka "Renault", oluqanjwe Kayaba.
Wayekhetha izinhlobo eziningi kwamanje kwalesi umkhiqizo, "Kengo", "Mega", "Traffic", "Premium ':" Nkosi "," Clio "," Laguna "," Magnum ", njll intengo yaso 30% .. ephakeme ukwedlula izindleko idivayisi uwoyela, kodwa okuningi iyashelela lapho ushayela emigwaqweni anolaka. Ngakho-ke ukushaqeka gazomaslyany "Renault" Abashayeli uncamela amafutha, eshibhile.
Yazi ukuthi "Reno" onobuhle eyenzelwe ukushayela kakhulu ku ezinhle amathrekhi izinga, anezinto ekhethekile ukushaqeka wezinciphisi - Kayaba Ultra SR. Ngemva ekunqobeni ijubane rotations inquma umthwalo omkhulu emikhiqizweni enjalo, futhi womabili kokucindezelwa futhi Rebound Damping. Nokho, i-traffic kwansuku ezisemadolobheni, zingabantu engeyinhle, ngoba rigidity okusezingeni eliphezulu nemigwaqo abangaphelele, njengoba wazi, sidinga isiphethu ethambile.
Nokho, kulesi sihloko ngeke okunomkhawulo ekuhlaziyeni ukushaqeka emakethe. Inhloso yethu ngobubanzi - ukumambula izimfihlo operation zabo eziphumelelayo zokuqhuba ibhizinisi. Njengoba kwaziwa kahle ukushaqeka wezinciphisi ukunikeza izakhi ukumiswa, ngokulandelana, ucabange ukumiswa ekahle. Njengoba wazi, lento sisebenta tinhloso letimbili letibalulekile:
Okokuqala, xhuma amasondo imoto enomzimba. Ngenxa wakhe, uma kudingekile motion traction egcwele.
Okwesibili, neutralizes (ubamba) oscillations ezenzeka ngesikhathi ukunyakaza.
Ukwehla kwentengo - kuyinto ...
Lapho ukulihlola ngokucophelela izakhi ukumiswa kuyacaca ukuthi mfutho ukushaqeka - a damper (eqeda oscillations) kudivayisi. Njengoba sekuzoqala embonini yezimoto (XIX - ekuqaleni XX leminyaka) wathi izingxenye ayiqhubeki iphila. Ngesivinini aphansi, ukumiswa izimoto ngowokuqala ulinganisele kahle ngokwanele iziphethu wedwa. Nokho, yobudala yesimanje isivinini ekumisweni ashukumisayo hhayi kuphela iqukethe iziphethu ngcono (iziphethu), okuyinto manje okuvame ukubizwa ngokuthi i-abstract kancane - i-elementi nokunwebeka. Lokhu akwanele. Ukuze sibonise lokhu, ake ucabange ngalo icala ejwayelekile ye imoto izithathe ukuze ixazulule leyo uhlevane komgwaqo.
Umsebenzi we ilungu nokunwebeka sobala - phezu umthelela amasondo endleleni bokungafani kufanele ukuthambisa buhlungu. Nokho, imoto yesimanje lapho ushayela has amandla omkhulu kinetic, nge "kwekhabhoni supernumerary" okuyiwona imigodi emgwaqweni ilungu nokunwebeka ukubhekana kweso. Ngakho-ke, i-inertia yomzimba kubangela entwasahlobo emva ukushayisana ehla enyuka. Lena umphumela engathandeki kakhulu. Phela, kungaholela resonance, kungaholela izingozi zezimoto (cabanga physics futhi amandla zithwala). Lokhu kwenzeka uma ukuguquguquka we njalo entwasahlobo uhlevane ukungezwa oscillation sangaphambilini, okuyinto, ngeshwa, akuyona ucime. Avtoinzhenery ngokufanele basabela lesi simanga ngo ukuziqambela idivayisi ekhethekile Damping.
Ekuqaleni kwekhulu XX a damper (ukushaqeka mfutho) lasungulwa ukuze axazulule kunyakaza timphawu nokunwebeka. Umqondo incwadi yakhe yabangela inguquko ngempela elula nenhle. Ngemva bokungafani entwasahlobo endleleni amandla kokucindezelwa, nokwanda kwalo okwalandela futhi ngokunjalo, oscillation ucime idivayisi ekhethekile - a mfutho ukushaqeka. Nokho, thina ngeke siphathe njengobufakazi ucezu olulodwa okuyinto zivikela nokudludliza, ngokuqondene nokuziphatha ekahle izimoto endleleni damper wedwa futhi isici nokunwebeka akwanele.
Hhayi dampers iyunifomu
Eshiwo ngenhla contact dampers - kukhona izakhi ezikhethekile ukuze alondoloze kungenzeka isikhundla esiphezulu evundla nzile ukumiswa emkhathini. Kodwa ukumiswa asebenzayo ngempela akwanele. Ukuze yenze induduzo abagibeli umshayeli imoto akubhekwa imigodi futhi ngobumnene bentanta endleleni, udinga umsebenzi ehlelekile ukushaqeka wezinciphisi namanye amadivayisi, njenge:
Rubber amathaya kakhulu ekuqinisekiseni ukubamba efanele;
aziguganga iziphethu nezintwa ukumiswa iziphethu (ngaphandle kwalezo imisebenzi sekushiwo nathi) kumele ahlale ngaphakathi Ukucaciswa imvume bese ugcine imoto ezingeni elifanayo;
izakhi ezengeziwe iraba (kokuhlanganisayo futhi kokucindezelwa isebenza), uqede oscillations kusukela ngokuthinta izingxenye zensimbi komunye nomunye;
ukuqondisa amadivayisi, sokunquma engela oyifunayo ukuzungeza amasondo.
Nokho, noma ngabe yikuphi, yidivayisi main Damping imoto ncamashi shock absorbers - isihloko incazelo kwalesi sihloko. Ngosizo lwabo, ukuvumelana contact unomphela amasondo nge endleleni (umshini uya uma sinamathela umgwaqo), futhi, ngomqondo obanzi, kuba nokwenzeka ukhululekile ngempela ukushayela.
Yeka mfutho ukushaqeka ngesimo?
Ngaphandle, kubukeka sengathi idivayisi cylindrical ukuthi unamathele ohlangothini olulodwa ukuze uzimele imoto, ngakolunye - ukuze ukumiswa. Ngaphakathi piston ushukumisela damper. Lokhu induku ezihambelayo umgodi egcwele igesi, uwoyela noma ukubopha uketshezi. Ngenxa piston kokucindezelwa uwoyela incipha ijubane layo uma igijima. Iyehla iyenyuka ukumiswa damper piston oscillations kunqunywa. Ukumiswa ngenkuthalo ezihambayo (okuyinto emgwaqeni anolaka), ukumelana ngaphezulu ziphephile ukushaqeka mfutho. uthuthumele abahlukahlukene wathola uma imoto ishayela emgwaqweni anolaka, kodwa futhi kunyakaza ngesikhathi unyathela amabhuleki noma ekuqaleni ukunyakaza damped (sashintsha) ukushaqeka mfutho. I energy kinetic we oscillation iguqulwe ibe ukushisa, amafutha okuholela ngaphansi kokucindezelwa piston. Ukushisa okuholela is kwashabalala.
Kanjani mfutho ukushaqeka lapho isondo sihlangana endleleni pothole? It is onomfutho, niyalukhipha hit, kuyilapho piston yayo iyasebenza ekhonsathini ne iziphethu ukumiswa. Nokho, kule divayisi akusebenzi umjikelezo kuphelile, njengoba isandiso yayo, isb. E. piston ihamba aphume mfutho ukushaqeka. Ngaphandle kwayo, ukumiswa entwasahlobo ngabe juba phezulu emzimbeni imoto nge afanayo ezingamalungu agxishiwe ndawonye ukungqubuzana pothole. Nokho, ukuhamba imoto ukushaqeka mfutho piston ezisebenza isandiso uwoyela futhi engasenamahloni.
Umklamo ukushaqeka wezinciphisi
Ngokomthetho, idivayisi ngesikhathi ukusebenza kwawo iguqula kunyakaza mechanical into nokunwebeka ukushisa. Shock esikhundleni mfutho, isiphelile isisetshenziswa yabo kahle ukusetshenziswa - it unesibopho. Phela, ukusungula "into entsha" izinguquko ngokushesha waqaphela ukuthi ukuziphatha imoto. Ngakho-ke, ukuba umshayeli onolwazi ukuqasha ngokuhlolisisa ilungelo ukushaqeka mfutho. Futhi ukukhetha, kholwa kimi, kukhona inala. Avtorynok ohambelana elihlale imikhiqizo abakhiqizi ovelele (brand) hhayi. Kufanele izindaba lesi sici ukubuya. Kodwa okokuqala, kunengqondo ukuba ezicezile "umuntu ngeke" isimiso bese uzama, "ubona impande", okungukuthi ukuqonda umehluko oyisisekelo phakathi izinhlobo ezahlukene ukushaqeka wezinciphisi (A).
Ukwahlulela ngokubukeka umehluko kwesakhiwo ke A sehlukaniswe esalisekela kanye ezimbili-pipe. Uma ihlukaniswa ngokweminyaka uhlobo ukusebenza naphakathi kwakuqeda ukushisa ekhiqizwa emva ukuguqulwa amandla kinematic, ama-shock absorbers kukhona uwoyela, igesi-uwoyela negesi.
Yini ama-shock absorbers kungenziwa Kunconywa umndeni okuphumuzayo, okuthiwa ushayela? Akubizi, design esilula ayikwazi ukumelana novivinyo olunzima ngokwedlulele. A kabili tube kukhona inert ngaphezulu futhi ube mass esikhulu. Ngaphezu kwalokho, isikebhe double selehlile sibi kakhulu. Ukuphumelela Damping amadivayisi ezimbili ipayipi incike ukufakwa. Kuyaziwa ukuthi 100% efeza umsebenzi wayo damper ukukhwezwa ncamashi perpendicular ukumiswa, kodwa uma le engela luyanda 50 ° ke ukusebenza kahle yayo kuyehla kube 68%.
Umklamo izici eziningana ezinjengolwazi uhlanganisa ezisebenza negabha, ngaphakathi okuyinto itholakala piston, futhi izindlu yangaphandle, ukugcina amafutha ngokweqile. Ngokuhamba umjikelezo yabo yokusebenza kwe-piston sihamba amafutha ngemigudu zabo, futhi odlulela ngokusebenzisa isibani kokucindezelwa umphini elise ezansi. Lapho imikhiqizo ukuthenga kufanele uyinaka amafutha okungadingi ubilise ezingeni lokushisa ngezansi 150 ° C. Ngesikhathi esifanayo, naphezu intengo evumayo, akufanele ukufakwa isizukulwane yakamuva izimoto.
monotube ukushaqeka wezinciphisi
Lo mklamo luyisisekelo A. zanamuhla mfutho ukushaqeka okunjalo siqukethe isibani eyodwa, futhi ngesikhathi esifanayo osebenza njengokuvimbelayo umthamo ukusebenza ngenxa piston futhi izindlu. Kungaba wokubacindezela (uwoyela) noma hydropneumatic (gazomaslyanoy). Ukuguqulwa mithandazo okubhekiselwa kuzo nangokuthi kuhlanganiswe. Isimiso wokusebenza amafutha ulula. Kukhona isilinda ukusebenza egcwele amafutha (uketshezi wokubacindezela). It ushukumisela piston nge valve akhethekile ulinganiswe, ngokunembile nge system yabo kokuba izici ngokukhethekile ofanelana ukumiswa imoto ethile.
ukusebenza Dynamic ngalokho kumiswa simiswe ngalendlela lelandzelako:
Lapho ama-valve zivaliwe, uketshezi wokubacindezela lidlula kuphela dlula piston siteshi. ukushaqeka umfutholuketshezi mfutho isici ke kuba elukhuni.
Uma ama-valve zivulwa, eseduze isinxephezelo ekamelweni A, isici yayo wokubacindezela iba ethambile.
Futhi ukuseviswa of valve ukushaqeka mfutho, ezisebenza kokucindezelwa, kumele adlule uketshezi wokubacindezela kuka valve isheke okuyinto kwabangela phezu Rebound. Ngakho, lapho bonke valve ukuvula Damping piston incipha.
kuhlanganiswe ukushaqeka wezinciphisi
I hydropneumatic (gazomaslyanyh) esikhundleni emoyeni dampers asebenzisa isisi esikhalisa ecindezeleke ngesikhathi ukucindezela 4-20 eziphindwe. abashayeli Bakhe ebizwa ngendlela yabo - ". igesi overpressure" Kulokhu ingcindezi gas - akuyona bethanda, njengoba yokunciphisa aeration (ukuxuba emoyeni ngamafutha) kanye ezengeziwe nokunwebeka ukumiswa isici. Kokunye-ipayipi Futhi akukho kokucindezelwa valve aphansi. Piston elawula ngokuphelele ukumelana kokubili kokucindezelwa futhi Rebound. Bona angazamukela uwoyela ezingaphezu kuka ezimbili ipayipi sinye, okusho ukuthi ngosizo lwabo, okungcono Damping efinyelelekayo.
Kuphethwe futhi dampers kazibuthe
Oholela abakhiqizi ukushaqeka wezinciphisi umzamo ngempela yokuqala ukuxazulula inkinga lobuchwepheshe nokulungiseka mishini. Inkampani American-Belgian Monroe ekhiqizwa ezindongeni uMbhalo zokusebenza olulodwa-ipayipi A ekhethekile isiqondiso anemifantu esetshenziswa ukulungisa ukuze ukushayela ethule noma asebenzayo. I-Japanese inkampani Kya e phansi ipayipi elilodwa nge akude kwesigubhu A, ngokudlula piston ukukhwezwa ahlukene control valve. Inkampani German ZF wadala luyalawuleka ukushaqeka mfutho "Opel-Astra", usebenzisa umklamo kabili tube igesi-uwoyela ngamalahle. valve ababili Solenoid ezansi le mfutho ukushaqeka kanye piston kulawulwa processor ekhethekile, ethungatha imingcele amasondo, ayo, ukumiswa.
Ngisho ngaphezulu ezithembisa entsha, okuthiwa ukushaqeka kazibuthe "Chevrolet", setha imodeli ngonyaka odlule Chevrolet Corvette. Lena ngokuhlanganyela eziphambili ukuthuthukiswa automaker futhi izinkampane eDelphi. Njengoba lisetshenziswe therein Esikhundleni samafutha magnetorheological uketshezi uyakwazi imvamisa eliphezulu (kuze kube izikhathi ezingamashumi 1000 ngomzuzwana) ukushintsha viscosity yayo ngaphansi kwethonya inkambu kagesi. Lapho lesi simiso ayisetshenziselwa, uhlelo umphini: i Damping ikhiqizwa kuphela ngezithukuthuku umphumela magnetorheological. Lo mklamo liyathembisa kakhulu: asikho isidingo ukuwela stabilizers kudivayisi lula we A no avele izici ezihlaba umxhwele sokuqapha kanye nokulawula ukuqina ukumiswa.
Inani wokubacindezela ukushaqeka mfutho izici impumuzo umgwaqo
Ekumisweni ukuklama ezicini ezihlukahlukene ukusebenza kwawo siyothathwa njengobufakazi. Phela, abampofu ebusweni izinga umgwaqo inquma izindlela ezahlukene wokusebenza. Ngakolunye uhlangothi, kukhona okungahambi ezincane okuphindayo ungavumeli A ukuqondisa. Kulokhu, langempela wokubacindezela isici esithambile. imigodi elikhulu efanayo ukusongela kokucindezelwa aso agcwele ophoqelelwe ukuthi ngokuvamile kubangela zokugwema ukuphuka we mfutho ukushaqeka. Ngesikhathi esifanayo ke kudinga izici ngendlela elukhuni wokubacindezela zedivayisi.
Ngakho-ke akusizi ngalutho babuza: "? Yini uthuthumele kangcono - esithambile noma esiqinile" Phela, olufanele ngokuya ukusebenza yesikhathi eside A umsungulo hhayi kuphela, kodwa futhi manageability.
Esinye isici - ukususwa ukushisa mfutho - kubalulekile ukuze isebenze kahle. Ngempela, lapho sibhekene abanolaka ukushisa imodi ivelele, futhi kufanele inikezwe. Ngakolunye uhlangothi, ebusika emafutheni damper sikhula futhi isici yayo wokubacindezela iba baqinisa. Kulokhu, kubalulekile abahamba ngezimoto choice esifanele lamafutha. Kuyinto engathandeki ukusebenzisa uketshezi nge wokuqukethwe lelisetulu izithasiselo, ngoba yokugcina ibe impahla ukuthambisa zenjoloba. Ngokuvamile, ochwepheshe batusa ngokusetshenziswa kwamafutha uphawu GRG-12, AFT. Nokho, emakhazeni kufanele bakhethe ketshezi 75Wt viscosity. Ukuze amafutha ehlanganisa abicah, ngezinga viscosity kunqunywa kwezinye amayunithi - CPS, okuyinto-10 izikhathi kunangendlela wt.
ukuhlola ukushaqeka wezinciphisi
Kusukela akukho okuphakade, kuncike ukugqoka futhi ukushaqeka ezidayiswayo. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa umshayeli kufanele sitholakale ngesikhathi. Njengoba yaziwa, esikhundleni ofanele ukusebenza ezilahlekile shock absorbers kumele kwenziwe ngokushesha ukuthola. Ngaphezu kwalokho, eziphumelela kakhulu esikhundleni eyinkimbinkimbi k ngazimbili ezisekelweni ngamunye - ngezihluthu futhi ngemuva. Phela, ubuwula ukulindela emva esikhundleni olulinganiselwe ekahle Damping ukushaqeka ezidayiswayo.
Nokho, lokhu kuphela futhi akwanele. It ukuxilonga amadivayisi imoto eziyinkimbinkimbi lonke bahilelekile Damping. Ngemva operation evamile shock absorbers iyatholakala ku izakhi serviceable iraba (kokuhlanganisayo futhi kokucindezelwa isebenza), iziphethu unworn kanye leaf iziphethu. Ukugcina zonke izingxenye elisanda kushiwo izindlela kuzonciphisa umthwalo shock absorbers.
Lapho ukufaka esikhundleni
Ukuze umshayeli, zikhona izimpawu zokuqala a Ukuwohloka shock absorbers. Ake sibize kubo:
anda ibanga unyathela amabhuleki ngenxa Ukuwohloka controllability;
ukunciphisa ukhululekile isivinini okufakwayo ukuzungeza;
ukunciphisa ephephile isivinini aquaplaning (isango, uma kukhona amanzi phezu ice);
A bakhathale aqala ukukhiqiza umsindo lapho ufaka imoto ukujika noma ekunqobeni bokungafani.
Lapho ikhefu ukushaqeka
avtokorporatsii Modern wenza kahle kakhulu futhi kahle kakhudlwana A privnosyaschy induduzo esiphezulu for the ride. Nokho, uma ku amathrekhi ukhonkolo, bavalelwe bangasebenzi amakhilomitha 80 ayizinkulungwane nokuningi, ikhwalithi embi ebusweni umgwaqo ogcwele izikhisi kuholela ekuhlulekeni ezingalindelekile alamathuluzi ngisemncane kakhulu.
Iloli zenzeka njalo kakhulu ngaphakathi mfutho ukushaqeka lapho isondo imoto iwela pothole. Omunye uqala avuze uwoyela. Kusukela amagalelo induku zikhubazekile futhi dampers ezithambile wangqongqoza umphini ekamelweni. ukuhluleka okunjalo kusho ukwehluleka A uphoqe esikhundleni olungenamkhawulo. Ngakho-ke, abashayeli ngeke Cabangisisa ngawo wonke "kochwepheshe" futhi "nebubi" Thenga ukushaqeka ezidayiswayo. Izibuyekezo abashayeli ngesikhathi esifanayo, ibekwe izinkundla ekhethekile futhi kufanele babhekwe.
A kungenzeka futhi bonakalise uthuli ibala kubo. I izinhlayiya emihle, kanye ekamelweni ukusebenza, kusale imihuzuko kwi isitokwe. Ngenxa yalokho, namanoni aphezu yekani ukuba moya, futhi ngenxa yalokho uwoyela ukuvuza kwenzeka. ephelele nakakhulu olulodwa-tube A nge zangaphandle isinxephezelo ekamelweni. Idizayini ethuthukisiwe livumela ivolumu enkulu igesi onomfutho namafutha. Ngo ngaphezulu ngcono eziphambili emafutheni endleleni nesichichimayo kusukela main isilinda amatomu ukukhwezwa umphini uhlelo elawula ukuqina we mfutho ukushaqeka. Kukhona ukushintshwa A, lapho ebusweni elingaphandle tube lwahlolwa ukuze uwoyela zichichima.
umshayeli yanamuhla ulula ukuthola ilungelo ukushaqeka wezinciphisi semoto yakho. Kulokhu, ungasebenzisa isevisi esitolo bendabuko kanye inthanethi ezikhethekile. Ukuze kube lula amakhasimende ukukhetha okufanele ngiwo ukwethusa iqala esitolo sewebhu se-intanethi ngemiyalelo imodeli imoto. Ngemva kwalokhu zokukhwabanisa okulula umthengi ubona ezinye izinhlobo futhi kwenza kube dampers efanelekayo. Uma okunye wangabaza ukukhetha phakathi imikhiqizo okunye, kungasiza ukwakha umbono izibuyekezo eziningi abashayeli izinkundla ezikhethekile nazo zonke izinhlobo zezinsimbi izilinganiso.
Imoto idokhumende lokubhalisa
Izinyo isakhiwo: ubuqili yokwakheka exhumene ukusebenza